Artist dị iche iche na -agwakọta agụụ maka ịnyịnya na njem dị egwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Artist dị iche iche na -agwakọta agụụ maka ịnyịnya na njem dị egwu
Njem njem • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Tourism • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Nkà dị ịtụnanya na -agwakọta ịnyịnya na njem
Otu enyi m mere ka m mata ọrụ onye omenkà ama ama nke Britain, Marcus Hodge. O zitere m ihe onyonyo nke ọrụ ya, ihe osise ya dị oke egwu nke ịnyịnya, ehi, na ehi mere ka m nwee mmetụta nke na -eme ka mmadụ chee na ha ga -esi na akwaapụ wụpụ.
Onye na -ese ihe nwere ihe ngosi solo na -abịa na Osborne Studio Gallery n'ọnwa Ọktoba.
Ihe a na -elekwasị anya na ihe ngosi a bụ ụwa nke ịnyịnya site na njem onye na -ese ihe n'ime afọ ole na ole gara aga.
Ọ bụ nne na nna ochie nke onye na -ese ihe gbanyụrụ ịhụnanya ya maka ịpụ mbụ nyocha obodo na ụwa wee dekọọ ya site na nka.
Ọ kpaliri mmasị m ma chọọ ịmatakwu banyere nzụlite ya. Achọpụtara m na Hodge, onye amụrụ na 1966, arụpụtala ọmarịcha ọrụ mmụọ sitere na njem ya site na Andalucia gaa India.
Ndị hụrụ nka ga -enwe ike ịhụ eserese Hodge n'ihe ngosi solo na -abịa n'ihu Osborne Studio osisi site na Ọktọba 5-28, 2021. Nchịkọta a na-akpọkọta onyonyo site na njem nke onye na-ese ihe n'ime afọ abụọ gara aga wee nyochaa ụwa nke ịnyịnya, site na ịnyịnya Marwari nke Rajasthan, ịnyịnya circus mba ofesi nke Monaco, ruo n'ịzụ anụ na ịnyịnya Arab. nke Middle East.
Ndị nne na nna ya ochie bụ Hodge zụlitere ọtụtụ afọ na India, ha wee kpalie mmasị ya ịpụ wee malite inyocha obodo ahụ. Isi mmalite mkpali kacha mkpa maka ihe ngosi a bụ Nọvemba Camel Fair na Pushkar, Rajasthan, otu n'ime ahụmịhe njem kachasịnụ na India, ihe nkiri dị egwu. Ọ kọwara etu ihe ngosi a siri malite: “Ohere bilitere igosipụta ọrụ ọzọ na ụlọ ihe nkiri Osborne ebe m nwere ihe ngosi solo gara aga. Emeela m njem ọtụtụ ugboro na India n'ime afọ ndị gara aga wee gaa n'obodo Pushkar n'oge ngosi kamel, ugboro anọ ma ọ bụ ise.
“Pushkar bụ obere obodo mara mma, dị nsọ nye ndị Hindu, nke na -amalite ndụ maka ngosi kamel kwa afọ. Ị nwere ike nwee ọ joyụ n'okporo ụzọ mana ịlaghachi n'obere ụlọ dị jụụ mgbe ọ dị mkpa. Ebe mara mma iji nwee ọmarịcha ọdịiche na oge. ”
"Mana tupu mmalite ọrịa a, agara m El Rocio na Andalucia ebe ha nwere nnukwu ememme ọzọ, ya na ọtụtụ narị ịnyịnya na ndị si mpaghara dị iche iche."
Mgbe afọ ise gụchara usoro Old Master na Palma, Mallorca, Hodge mere aha ya dịka onye na -ese foto. O bu ụzọ gaa India na 2000. Njem a bụ mmalite nke oke mmasị na India, maka ọdịbendị ya, ọdịdị ala ya na ịdị mma ime mmụọ ya. Agbanyeghị na ihe ngosi ya na -abịanụ nwere isiokwu ndị na -agba ịnyịnya, ụdị ya na -agbanwe mgbe niile ka ọ nwee obi ike ma dị mfe, mgbe ụfọdụ eserese ihe atụ na -enye ohere ka a ghara ịkọwa ihe.
Ihe osise ndị a na -elekarị anya na ụmụ anụmanụ na ndị mmadụ, ụkpụrụ ụlọ na odida obodo. Dị ka Hodge si kwuo, "isiokwu isiokwu a na -akpali akpali mana n'ezie ọ bụ nguzozi n'etiti nke ahụ na iji ya dị ka ikpo okwu iji mepụta nsonaazụ na -akpali akpali n'ezie. Ime elu na esemokwu nke eserese na -arụ ọrụ dị oke mkpa dị ka ịnọchite anya onyonyo ma mgbe ọ ga -aga nke ọma, enwere nkwekọrịta dị mma n'etiti ha abụọ. ”
Hodge na -ekwu na ọ na -alaghachi na isiokwu ịnyịnya n'ihi na ọ na -ahụkarị ihe na -adọrọ mmasị na nke na -adọrọ adọrọ banyere ha - ọmarịcha nkwekọrịta mma na nka. N'agbanyeghị mgbanwe ndị siri ike, otu isiokwu na -adịgide adịgide, nke bụ isi, bụ India. Ọ na -ekwu, “Usoro eserese na -esi na nnọchite anya gaa na nkịtị na azụ n'ihi na ọtụtụ ahụmịhe ị nwere ebe ahụ, chọrọ nzaghachi dị iche. Anụmanụ mara mma ma ọ bụ odida obodo chọrọ ka m tee ya n'ikwesi ntụkwasị obi wee nwaa ime ihe osise na -eju afọ n'ụzọ anụ ahụ yana ezigbo nnọchite anya isiokwu ahụ. ” Isiokwu ndị ọzọ, dị ka akụkụ akụkọ ihe mere eme nke ọnụ ụzọ ámá nke India ma ọ bụ usoro eserese nke Varanasi, na -achọ usoro dị iche. Nke a bụ ihe na -eme ka ahụmịhe ahụ dị ndụ ma na -atọ ya ụtọ.
Agbanyeghị na ọrụ ya lekwasịrị anya na India na El Rocio na Spain, enwerekwa eserese ole na ole sitere na France ebe nna ya (bụkwa onye na -ese ihe) bi. Hodge na -ewepụ aro ọ bụla na ihe ngosi ahụ nwere ike ịmasị ndị bịara India. “Achọghị m. Enwere ike ịnụ ụtọ eserese a na ọkwa nnọchite anya yana dị ka eserese na -agbanyeghị ebumnuche. Ọdịda anyanwụ mara mma bụ ọdịda anyanwụ mara mma ebe ọ bụla ọ mere. ”
Hodge malitere eserese mgbe ọ gara ụlọ akwụkwọ nka nka na Mallorca mgbe ọ dị afọ 25. “Eji m afọ ise mụta ihe site n'aka onye na -ese ihe Joaquim Torrents Llado. A na m akuzikwa klaasị otu izu n'izu ụlọ akwụkwọ nka ka enwere olile anya na m ga -agafe ụfọdụ n'ime ya. Ọtụtụ ndị na -ese ihe dị iche iche na -amasị m. Mana echere m na ha niile na -ekerịta ogo ha na -eji agba n'ụzọ na -egosipụta nke ọma. Ọzọkwa, ugbu a a na m anụrị ọmarịcha nka India Miniature Mughal, nke a na -eme ka ọ dị ndụ karịa mgbe ị malitere ịgụ banyere ndị dị n'ime ha. ”
Ndị na -enweghị ike ileta ihe ngosi ahụ n'onwe ha nwere ike ịhụ onyogho ahụ na webụsaịtị Osborne gallery na Webụsaịtị nke Hodge .
Mgbe a jụrụ ya banyere atụmatụ ọdịnihu ya Hodge kwuru, sị: “Echere m, mgbe ọ dị ka ezi uche, ịlaghachi India wee gaa n'ihu na -arụ ọrụ ebe ahụ wee hụ ihe na -eme. Ọ naghị amasị m ịme atụmatụ nke ukwuu, mana ịchọta ebe na -akpọ gị ma ghe oghe maka ihe ọ bụla ga -eme. ”